Uncategorized – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Axmad	 Jan 16, 2022 0
Markazka Al-Yaaquut oo taabacsan Jamaacada Ansaarul Muslimiin Fii Bilaadi Suudaan ee ka jihaada waddanka Nigeria ayaa baahiyay War-Saxaafadeed ku lifaaqan sawirro laga soo qaaday weerar cag marin oo ay mujaahidiinta Jamacaada la beegsadeen…
cusmaan	 Jan 16, 2022 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Axad taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Al-Shabaab oo Sheegatay Weerar Lagu Beegsaday Macallimow.
Barqanimadii maanta waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay weerar qorsheysan oo qarax loo adeegsaday kaasoo lala beegsaday Afhayeenka xukuumadda federaalka Maxamad Ibraahim Macallimow. Sida aan xogta ku heleyno waxa uu weerarku ku qabsaday…
Kumuu ahaa dagaalyahankii fuliyay weerarkii agagaarka Afisyooni ee lagu beegsaday saraakiisha…
Idaacadda Andalus ayaa baahisay dardaaranka dagaalyahankii fuliyay weerar maalmo ka hor Muqdisho ka dhacay. Maxamed Aadan gureey oo sidoo kale loo yaqaanay Siciid, waa dagaalyahankii fuliyay weerarkii naf-hurnimo ee Arbacadii la soo…
Barnaamijka Taariikhda Dagaal Oogayaashii Muqdisho. (Qeybta 3aad)
Warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxay idiin soo gudbineysaa barnaamij taxane ah oo 8 qeyb ka kooban kana hadlaya taariikhda dagaal oogayaashii Muqdisho ee la baxay (Isbahaysiga la dagaalanka argagixisada) ee Mareykanka u shaqeynayay.…
cusmaan	 Jan 15, 2022 0
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Taariikhda hijriguna waxay ku beegan tahay 13-06-1443,…
Dhegeystayaasha iyo akhristayaasha ku xiran Mareegta Idaacadda Islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan Wararka iyo Barnaamijyada ay Idaacaddu baahiso. Maanta waa Sabti taariikhda hijriguna waxay ku beegan…
Gudoomiye Shuute: “Al-Shabaab Si Gaar Ah Ayay Ii Raadinayaan 10 Sano Xaaskeyga Lama…
Xassan Cali Nuur Shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada DF ayaa kana mid ah ragga ugu ilaalada iyo dhaqaalaha badan dowladda ayaa aad uga baqaya ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka hawl gala magaalada Muqdisho.…
Hey’adda Kafaala oo Madraso U Furtay Agoonta Kuunyo Barrow.
Madarasada Al-Misbaax ee barashada Quraanka kariimka iyo Tarbiyada Islaamka, waa madaraso islaami ah oo ay mu'assasada Al-Kafaala ee xanaanada Agoonta ka hirgelisya deegaanka Kuunya Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhawaan munaasabad…
Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Digniintii Uu Mareykanku U Jeediyay Farmaajo.
cusmaan	 Jan 14, 2022 0
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Halkan waxaan idiin kugu soo gudbineynaa Barnaamijka…